Best ngosi mmịfe Songs Aro - Songs maka a ngosi mmịfe
> Resource> Atụmatụ> Best ngosi mmịfe Songs Aro
Ị pụrụ ichetụ n'echiche a nkiri na-enweghị ụda? Ma ọ bụ i nwere ike na-eleghara ndabere music mgbe ị na-ekiri a egwu nkiri? N'otu aka ahụ, songs dị oké mkpa iji foto ngosi mmịfe fim. The ngosi mmịfe songs nwere ike ike ịtọ ọnọdụ nke a ngosi mmịfe na-akpalite nri mmetụta gị ka ị na ngosi mmịfe kiriri ya. Jiri kasị mma ngosi mmịfe songs nke gị nhọrọ. N'okpuru bụ ụfọdụ anatara nke kasị mma foto ngosi mmịfe music, dị ka ịhụnanya ngosi mmịfe songs, Ụbọchị Ndị Nne ngosi mmịfe songs, wdg Họrọ onye ọ bụla n'ime ha na-eme ka a ngosi mmịfe na music, foto na vidiyo na, na-eji ngosi mmịfe software, DVD ngosi mmịfe Nrụpụta nke nwere aha nke kediegwu ngosi mmịfe Ndinam na-adị mfe na-ekere òkè na TV, YouTube na kọmputa.
1. Songs maka Ụbọchị Ndị Nne ngosi mmịfe
2. Top 10 Kasịnụ Ịhụnanya ngosi mmịfe Songs N'ihi na ndị hụrụ
3. Mwute Ịhụnanya ngosi mmịfe Songs Aro
4. Best Oldies Ịhụnanya Songs nke 80s
5. Ibudata niile n'elu music free na TunesGo
On Ụbọchị Ndị Nne, ndị mmadụ na-emekarị na-enye okooko osisi (carnations na Roses) dị ka Ụbọchị Ndị Nne onyinye. Ugbu a, e bụ ihe ọzọ na-ahọrọ, ị pụrụ ime ka a foto ngosi mmịfe na nne gị bụ mara mma foto na ikpokọta na a na-emetụ n'ahụ song banyere mama dị ka n'okpuru, ndị ga-kacha mma songs maka nne na-egosipụta gị pụrụ iche ịhụnanya gị oké mum.
1. A Nne ịhụnanya site Aretha Franklin
Aretha Louise Franklin bụ ihe American-agụ egwú na-akụ egwú. Franklin malitere ya ọrụ na-abụ abụ gospel na nna ya, ozi cl Franklin chọọchị dị ka nwatakịrị.
2. A Song N'ihi Mama site Boys II Men
Boyz II Men bụ ihe American R & B olu ìgwè, kasị mara maka mmetụta uche ballads na a cappella harmonies.
3. Ihe ọ bụla na ihe niile site Martina McBride
Martina Mariea Schiff, mara professionally dị ka Martina McBride, bụ ihe American mba music-agụ egwú, songwriter, na ndekọ na-emeputa. Ọ mara maka ya soprano abụ abụ nso na mba ya pop ihe onwunwe.
4. Ezigbo mama m site Melissa Champlion
dịghị ihe ndekọ hụrụ
5. Do You Remember by Phil Colins
Philip David Charles "Phil" Collins, LVO, bụ ihe English-agụ egwú, songwriter, multi-instrumentalist, music emeputa ihe na omee.
6. Ruo Mgbe Ebighị Ebi na-eto eto site Rod Stewart
Roderick David "Mkpanaka" Stewart, CBE bụ a British nkume na-agụ egwú-songwriter. Mụrụ na zụlitere London, ọ bụ ya bụ nke English na Scottish okpu. Stewart bụ otu n'ime ndị kasị mma-ere music artists niile oge, ọ na-ere karịrị 100 nde ndia n'ụwa nile.
7. Kasịnụ Ịhụnanya nke All site Whitney Houston
Whitney Elizabeth Houston bụ onye America na-agụ egwú, omee, na-emeputa, na nlereanya. Ke 2009, Guinness World Records e zoro aka na ya dị ka ndị kasị ọdịda nwanyi omume niile oge.
8. Aga m nwere ikwu Na Na Na Na a Song site Jim Croce
Country ndiife, ndiife
James Joseph "Jim" Croce bụ ihe American ndiife na-ewu ewu nkume na-agụ egwú nke oge 1960 na mmalite afọ ndị 1970. N'etiti 1966 na 1973, Croce tọhapụrụ ise studio albums na 11 kpọrọ.
9. M Nwa Gị site Barry Manilow
Pop, Easy-ege ntị
Barry Manilow bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter na-emeputa. Ọ na-kasị mara maka ndị dị otú ahụ E dị ka "Mandy", "Ike Smile enweghị Ị", na "Copacabana".
10. m na-echeta mama m site Blac haze
Blac haze bụ a rapper A ọtụtụ ndị na-ekwu na 'blac haze' bụ tupac shakur, n'ihi na o nwere kpọmkwem otu olu na ịke. Ọ malitere ọrụ ya otu afọ mgbe Tupac ọnwụ (1997).
11. m chọrọ a mama m nke ga-adịru mgbe ebighị ebi site Cyndi Lauper
Pop, nkume, ọhụrụ efegharị efegharị
Cynthia Ann Stephanie "Cyndi" Lauper bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, omee na LGBT mmume. Ya ọrụ ka spanned ihe karịrị afọ 30.
12. m na-achọ Ị Hụrụ n'Anya site Natalie Cole
Natalie Maria Cole bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, na ngosi. Nwa-nwayi Nat King Cole, Cole bilie ka egwú unen ke ufọt ufọt 1970 dị ka a R & B artist na Hits "Nke a ga-abụ", "atọsa", na "Ịhụnanya Anyị".
13. Mama site BJ Thomas
Billy Joe "BJ" Thomas bụ ihe American na-ewu ewu na-agụ egwú. Ọ na-karịsịa mara maka ya hit songs nke 1960 na 1970, nke pụtara na Pop, obodo, na Christian music chaatị dị iche iche.
14. Mama kwuru na e ga-ụbọchị dị ka nke a site Shirelles
The Shirelles bụ American girl ìgwè na-enweta na-ewu ewu ná mmalite 1960. Ha gụnyere nke ụmụ akwụkwọ ibe Shirley Owens, Doris Coley, Addie "Micki" Harris, na Beverly Lee.
15. mama anyị site Boys 2 ikom
16. Ụbọchị Ndị Nne site Jessie L. Gaynor
Jesse L. Smith Gaynor bụ ihe American dere nke ụmụ music. O dere ihe ahụ music maka maara nke ọma ụmụ lullaby, "The Slumber Boat", na mmekota na ụmụ na-ede akwụkwọ, Alice CD
Wondershare TunesGo - Download music free na TunesGo
Ịhụnanya songs e-agbanwe site ugboro. Ego ebe a maka ịhụnanya songs Oldies ma goodies. N'okpuru ebe bụ kasị ukwuu ịhụnanya songs igosipụta gị pụrụ iche mmetụta mgbe ị na-na ịhụnanya.
1. Cruisin 'site Huey Lewis & Gwyneth Paltrow
Gwyneth Kate Paltrow bụ ihe American omee, na-agụ egwú, na nri onye dere. Paltrow nweela n'oge amamọkwa n'ihi ya arụ ọrụ na na fim dị ka psychological thriller Asaa, abụghị Brad Pitt na oge ejije Emma, ​​na ncherita Jeremy Northam.
2. Ị na-aga Ịkwụsị My Heart site Elton John & Kiki D.
3. Ebighebi Ịhụnanya site Diana Ross & Lionel Ritchie
Lionel Brockman Richie, Jr. bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, egwú, ndekọ emeputa ihe na omee. Malite na 1968, ọ bụ onye òtù nke òtù egwú Commodores bịanyere aka na-Motown Records.
4. House nke Ịhụnanya site Amy Grant & Vince Gill
Amy Lee Grant bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter, egwú, na-ede akwụkwọ, media àgwà na-eme ihe nkiri. Ọ mara maka arụ dịkọrọ ndụ Christian music na ihe ịga nke ọma crossover na da music na 1980s na 1990s.
5. I Wanna Too Old Site Ị site Adam Sandler
Adam Richard Sandler bụ ihe American omee, ome nto ochi, screenwriter, film-emeputa, na-akụ egwú.
6. Islands na Stream site Dolly Parton & Kenny R.
Dolly Rebecca Parton bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter, omee,-ede akwụkwọ, na-azụ ahịa, na akwalite ọdịmma ndị mmadụ, mara bụ ya na-arụ ọrụ mba music.
7. Ọ bụ gị Ịhụnanya gị site Tim McGraw & Okwukwe Hill
Samuel Timoti "Tim" McGraw bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter na omee. Ọ na a lụrụ ibe-agụ egwú Okwukwe Hill Kemgbe 1996, ma ọ bụ nwa nke oge baseball ọkpụkpọ tug McGraw. McGraw ka a tọhapụrụ iri na atọ studio albums.
8. Dị nnọọ Ị na m site Eddie Rabbit & Crystal Gayle
Crystal Gayle bụ ihe inwe-emeri American mba music na-agụ egwú.
9. Otu Boy One Girl site Collin Raye
Floyd Collin Wray bụ ihe American mba music na-agụ egwú, mara professionally dị ka Collin Raye, na mbụ dị ka Bubba Wray. N'okpuru ikpeazụ aha, o dere dị ka onye so mmachi The Wrays n'etiti 1983 na 1987.
10. ị mara mma site James Agụba
James Agụba, Sacha Skarbek, Amanda Mọ
James Hillier Blount, mma mara ya ogbo aha James Agụba, bụ ihe English na-agụ egwú-songwriter. O banyere na EMI tupu ichebe a ndekọ nkwekọrịta na Atlantic Records na custard Records.
Mgbe ụfọdụ, ị pụrụ ịdị mkpa ka maara banyere mwute songs. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke mwute ịhụnanya songs. The songs na-adabara na akụkọ nke hụrụ n'anya nwụnahụrụ ma ọ bụ nanị furu efu ịhụnanya a gbasaa.
1. All Around Me site Flyleaf
Post-grunge, Christian nkume, ọzọ nkume
Flyleaf bụ ihe American arọ metal gbalaga, guzobere ke Belton na Temple, Texas n'ógbè ke 2002. The gbalaga ka charted on mainstream nkume, Christian pop na Christian metal Genres.
2. Ịtụnanya n'ihi na ọ bụ Ihe fọrọ nke nta
Emo, ọzọ nkume
Ihe fọrọ nke nta bụ onye American Kraịst oké nkume mmachi si Clearwater, Florida, kasị mara amara n'ihi na a na fronted bụbu Underoath oku igba na vocalist Aaron Gillespie.
3. Na na site Kaiser
Kaiser bụ ihe American oké nkume mmachi si Franklin, Tennessee, guzobere 2004. gbalaga ugbu a mejupụtara edu ndú vocalist Hayley Williams, bassist Jeremy Davis, na guitarist Taylor York.
4. enwusikwu site Kaiser
5. agbajikwa site Seether feat. Amy Lee.
Seether bụ a South African ike oké nkume mmachi tọrọ ntọala na May 1999 na Pretoria, South Africa. The gbalaga mbụ e guzobere n'okpuru aha Saron Gas ruo mgbe renaming ya Seether ke 2002. Disclaimer bụ mbụ ha album na isi labeelu mpụta mbụ.
6. Celler n'Ọnụ Ụzọ site Izere The Fate
Izere The Fate
Izere Fate bụ ihe American post-hardcore gbalaga si Las Vegas, Nevada, kpụrụ na 2005 na mbụ si Pahrump, Nevada. Ha na-aka na iri na otu Seven Music.
7. Lee aga Ọ dịghị ihe site Treaty nke Paris
Treaty nke Paris
pop Punk, ọzọ nkume
Treaty nke Paris bụ ihe American oké nkume mmachi si Chicago, Illinois. The gbalaga mejupụtara ise òtù: Phil Kosch, Dan Wade, Alex Maier, Chris Insidioso na Mike Chorvat.
8. Lee anyị na-aga ọzọ site Kaiser
9. m Arịakarị Ọrịa site Flyleaf
10. m nwute site Buckcherry
Ike nkume, ọzọ nkume
Buckcherry bụ ihe American oké nkume mmachi si Anaheim, California guzobere 1995. gbalaga tọhapụrụ abụọ albums, Buckcherry na Time Bomb, tupu dissolving n'oge okpomọkụ nke 2002.
11. Learnig daa site Boys Dị ka Girls
Boys Dị ka Girls
Pop Punk, pop nkume, ọzọ nkume
Boys Dị ka Girls bụ ihe American oké nkume mmachi si Boston, Massachusetts. Kpụrụ ke 2005, ìgwè ahụ nweela mainstream ude mgbe ọ tọhapụrụ ya onwe-akpọ mpụta mbụ album.
12. Ka a na-aga Kaiser
13. Hụrụ n'Anya n'Anya bụghị A Asọmpi (Cover) site Kaiser
Ricky Wilson, Andrew White, Simon Rix, Nick Baines, na Nick Hodgson
Ò nwetụla mgbe ị nụrụ a song na dị nnọọ maara ma ike aha ha? Ma ọ bụ n'ebe a song nke nwere ike ime ka-agaghị echefu echefu na-echeta gị? N'okpuru ebe bụ Oldies ịhụnanya songs na ha nọ mgbe nnọọ ewu ewu na ka egwuri site redio site n'oge ruo n'oge. M na-atụ ị ga-esi na anya na "Yeah, ọ bụ!" na-esonụ Oldies ịhụnanya songs ndepụta.
1. Against All Nsogbu site Phil Collins
Soft nkume, pop
2. Always na Ruo Mgbe Ebighị Ebi site Heatwave
Heatwave bụ mba Funk / disko gbalaga guzobere 1975.
3. Naanị site Heart
Obi bụ ihe American nkume gbalaga nke mbụ hụrụ ịga nke ọma na Canada na mgbe e mesịrị na United States na n'ụwa nile.
4. All nke Ịhụnanya site Air Tụkwasịnụ
Graham Russell na Clive Davis
Air Tụkwasịnụ bụ Australian na adụ nkume duo, esịnede British-mụrụ na-agụ egwú-songwriter na guitarist Graham Russell na-edu ndú vocalist Russell Hitchcock.
5. Amanda site Boston
Rock, mba nkume, adụ nkume
Boston bụ ihe American oké nkume mmachi si Boston, Massachusetts, na-enweta ha kasị dị ịrịba ama ihe ịga nke ọma n'oge 1970 na afo 1980, Otutu.
6. Broken Nku site Mr. Mister
Mr. Mister bụ ihe American pop oké nkume mmachi kasị ewu ewu na n'afo 1980.
7. ntakwunye akpachapụghị anya site Wham!
Pop,-acha anụnụ anụnụ-eyed mkpụrụ obi, ezigbo Jazz
Wham! bụ ihe English egwú duo kpụrụ George Michael na Andrew Ridgeley na n'oge n'afo 1980.. Ha na-eji nkenke oge mara na United States dị ka Wham! UK ruru ka a na-akpọ agha na-American gbalaga.
8. Crazy N'ihi Ị site Madonna
Madonna Louise Ciccone bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, omee,-agba egwú na-azụ ahịa.
9. nwere ike na a na-site Tiffany
Tiffany Renee Darwish, makwaara dị ka Tiffany, bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, omee na mbụ n'afọ iri na ụma na akara ngosi. Ọ bụ kasị dị ịrịba ama n'ihi na ya 1987 cover nke "Echere m na anyị na-naanị Ugbu a,", mbụ dere site Tommy James na Shondells na 1967.
10. Ebighị Ebi ire ọkụ site The Bangles
The Bangles bụ onye American pop nkume gbalaga nke guzobere Los Angeles na 1981. The ìgwè sitere na n'oge n'afo 1980., isi ọtụtụ hit kpọrọ n'oge afọ iri.
11. ikwesị ntụkwasị obi na site Journey
Rock, adụ nkume
Journey bụ ihe American nkume gbalaga nke guzobere San Francisco na 1973, ekewet nke mbụ òtù nke Santana na Frumious Bandersnatch.
12. Aba site Dan Fogelberg
Daniel Grayling "Dan" Fogelberg bụ ihe American egwú, songwriter, dere, na multi-instrumentalist onye music e mmụọ nsọ site na isi mmalite dị iche iche dị ka ndiife, Pop, nkume, oge gboo, Jazz, na bluegrass.